LG dia manolotra ny LG X Cam, X Cam Power ary X Screen any Espana | Vaovao momba ny gadget
LG dia manolotra miaraka amin'i Fernando Torres sy ny X-Men ny andian-tsarimihetsika andiany X any Espana
Androany maraina dia nanao ny fotoana handalovanay ho an'ny fampisehoana ny andiany X an'ny LG izay misy finday avo lenta telo eo anelanelan'ny € 229 sy € 299. Ireo finday telo finday telo ireo dia samy manana ny mampiavaka azy ireo amin'ny hafa ary azo antoka fa afaka manangona mpampiasa maro.
LG dia nanana ny fanatrehan'i Fernando Torres, ny mpilalao baolina kitra sy ny masoivoho an'ny mpamokatra Koreana any Espana, ary ny fisian'ireo X-Men maromaro izay namelombelona ny fampisehoana ny LG X Cam, LG X Screen ary LG X Power. Ireo telefaona telo ireo dia samy manana ny mampiavaka azy, ny X Cam, noho ny fananany fakan-tsary faharoa miaraka amin'ny masom-pakantsary misy zoro mitovy amin'ny LG G5; ny X Power, noho ny fanananao batterie mahazaka avo 4.100 mAh; ary ny X Screen, izay mampiavaka an'io efijery faharoa «On foana».
1.1 Famaritana LG X Cam
2.1 Famaritana LG X Screen
3.1 Famaritana LG X Power
Ny X Cam dia manana fakan-tsary roa ary ny fahaizan'ny sary mivelatra. Ity fandriana faharoa ity dia manana solomaso misy zoro 120 degre izay ahafahantsika maka sary manaitra izay ahafahantsika maka singa bebe kokoa amin'ilay fakana sary. Ny fakan-tsary any aoriana dia 13 MP raha 5MP kosa ny faharoa.
Famaritana LG X Cam
Efijery FHD In-Cell Touch 5,2-inch
Octa-core 1.14 GHz puce
Fakan-tsary aoriana 13MP aoriana ary 5MP zoro faharoa
Fakan-tsary eo aloha 8MP
Fahatsiarovana RAM 2 GB
16 fahatsiarovana anatiny
Bateria 2.520 mAh
Refy: 147,5 x 73,6 x 5,2 mm
Milanja: 118 grama
Loko: Volafotsy / fotsy / volamena / volamena mena
Ny mampiavaka an'ity X Screen ity dia misy fampisehoana faharoa «On foana» izay efa hitantsika tao amin'ny LG's V10 sy ny maro hafa toa ny Galaxy S7. Io dia ahafahantsika mahita fampandrenesana, ny fotoana na hanao hetsika amin'ny fampiharana sasany nefa tsy tokony handrehitra telefaona. Azontsika atao ny misoroka ny famadihana azy in-150 isan'andro, ny salan'isan'ny mpampiasa matetika mampihetsika ny efijery.
Finday avo lenta voalohany miaraka amin'ny seho "On foana".
Famaritana LG X Screen
Sarimihetsika lehibe an'ny 4,93? HD In-cell Touch
Fizarana faharoa an'ny 1,76? LCD (520 x 80)
1.2GHz processeur quad-core
Fakan-tsary 13 MP aoriana
Refy: 142,6 x 71,8 x 7,1 mm
Milanja: 120 grama
Loko: volamena mainty, fotsy, raozy
Raha milaza isika fa afaka mahatratra ny bateria roa andro Miaraka amin'ny LG X Power, dia efa maneho hevitra momba ny mampiavaka azy manokana ary avy eo ny anarany. 4.100 mAh dia ny fahaizan'ny bateria an'ity telefaona ity izay mety indrindra ho an'ireo izay te hanadino ny famandrihana telefaona isaky ny roa minitra.
Miresaka isika iray ihany izay manana karatra microSD amin'ny andiany X.
Famaritana LG X Power
5,3? Efijery HD
Fakan-tsary lehibe 13 MP (AF)
Fakan-tsary eo aloha 5MP
Fahatsiarovana anatiny 16 GB miaraka amin'ny safidy mankany microSD (hatramin'ny 2TB)
Refy: 148,9 x 74,9 x 7,9 mm
Milanja: 139 grama
Fifandraisana: WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC
Loko: mainty, volamena, manga, titan, fotsy
Famaranana haingana, USB OTG
Ya misy any Espana ary ireto ny vidiny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » LG dia manolotra miaraka amin'i Fernando Torres sy ny X-Men ny andian-tsarimihetsika andiany X any Espana
Ireo mpampiasa Pokémon Go mihetsika dia latsaka hatramin'ny 80%
Ny talen'ny FBI dia miverina manarona ny webcam